Masjidka soomaalida ee Flen oo qarbudaad joogta ah lagu hayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Masjidka soomaalida ee Flen oo qarbudaad joogta ah lagu hayo
La daabacay tisdag 14 oktober 2014 kl 16.47
Cabdi Axmed Cumar: waan in nabad geliyadeena in la sugo
Cabdi Cumar oo farta ku fiiqaya daaqadaha weerarka lagu burburiyey masjidka Flen sabtidii la soo dhaafay. Foto:Warsame Elmi/Radio Sweden
Weerarkii kan ka horeeyey oo dhacay bishii september waxaa lagu burburiyey murayadaha albaabka ka hore ee laga soo galo masjidka. Sawirle: Warsame Elmi/Radio Sweden
Daaqadaha dhagoxaanta lagu burburiyey. Sawirle: Warsame Elmi/SR
Qaybta salaada ee masjidka Flen. Sawirle: Warsame Elmi
Masjid ku yaala degmada Flen ee Gobolka Sörmland ee dalkan Sweden ayaa qarbudad joogta ah la kulmaya. Masjidkan xarunta uu ku yaala ayaa horey u ahaan jirey kaniisad balse ka dib markii uu iibsadey urur muslimiin oo ay soomaalida degmadas leeyehiin ayaa loo badaley masjid.
Laakiin masjidka ayaa la kulmaya qarbudaad joogto. Tan iyo intii masjidkan dhidibada loo taagay muddo ku beegan labo sanno iyo xoogaa, ku dhawaad lix goor ayaa masjidkan loo geystey burburin. Bishan keliya masjidka waxaa loogeystey labo weerar oo qarbudaad ah.
Balse imminka weerarada ayaa soo dhaafay burburinta masjidka. Maalmahan waxaa billaabmay in baabuur lagu cayrsado dadka masjidka u soo cibaado doonta sida uu noo sheegay Cabdi Axmed Cumar oo ka mid ah guddiga masjidka.
- Waxaan dhacdey in dadka markey salaada habeynkii imaanayaan baabuuro lagu bursado. Waxaa timid dadka in ay saalada subax kaba cabsadaan in ay yimaadaan.
- Cabsida iyo culeyska na soo fuulay ma oran karno waa dadka Iswiidhishak ah ee Flen degan, waayo in badan oo wanaagsan ayaa ka buuxda oo noo timaada oo nala xiriirta. Waa dad nasoo dhaweynaya oo qalbi furan, dhibaatadaanna ka xun.
Weeraro lix goor ka badan
Sabtidii la soo dhaafey oo taariikhda ku beegneyd 11 bisha oktoober ayaa dhagaxaan waaweyn oo lagu soo tuurey lagu jajabiyey daaqadaha dhanka danbe ee Masjidka. Laakiin dhacdan ayaa aheyn tii ugu horeysey. 12kii bisha september ayaa weerar noocan oo kalo ah lagu jajabiyey muraayadaha albaabka hore ee laga soo galo masjidka. iyada oo imminka dayac tir ku sucdo buburka weerarkas ayaa weerarkan cusubi yimid. Sannadkan keliya weerarada masjidkan lagu burburiyey ayaa kor u dhaafaya afar dhacdo. Waxaa dhacdey xataa in hilib qaansiir lagu soo dhextuurey masjidka.
Cabdi Axmed Cumar ayaa sheegay in burburinta joogtada ah ee masjidka lagu hayo iyo handadaadaha kaleba ay cabsi weyn ku abuurtay dadka muslimiinta ah ee masjidka ku cibaadeysa. Waxuuna ka codsadey dowladda, siyaasiinta iyo weliba heyaddaha amnigaba in la sugo nabad geliyadooda.
- Siyaasiinta waa waajibkooda in ay bulsahda meesha degan, kuwooda muwaadiniinta ah iyo kuwooda deganaanshaha ku jooga in ay nabad geliyadooda sugaan oo uu qofka xor u yahay in uu diintiisa ku cibaadeysto, meelaha lagu cibaadeystana xeer baa jira difaacaya oo in dhibaato loo geysto ka illaalinaya. Waxaan weydiinaya siyaasiinta xeerkan ma masaajidda ayuusan qaban oo kaniisadaha, sinugoogyada iyo tembelada ayuu qabtaa, mise meel diin oo dhan?
- Xeerkas annaga halkee naga maray waayo dhacdadaan mar keliya ma ahan oo labo ma ahan oo saddex ma ahan, waa wax soo noqnoqonaya. Dowladda ma waxay suggeysaa inta dariiqyada baabuur nalaku jiirsiinayo ama nalaku xabadeynayo, ayuu yeri Cabdi Ahmed Cumar.
Hanjaabadaha lagu hayo ururada muslimiinta oo kordhay
tisdag 14 oktober 2014 kl 15.31